Mufudzi wechiGerman - Faira rakazara | Imbwa dzepasi rose
El Mufudzi wechiGerman iyo ndeimwe yemhando dzakakurumbira. Iyo imbwa inokudzwa kwazvo, yakangwara uye ine rudo imbwa iyo inoda kuita yakawanda yekurovedza muviri pamwe chete nemunhu anoichengeta. Uye zvakare, anowirirana chaizvo nevana, vaanopedza navo nguva dzinofadza uye vaanochengetedza zuva nezuva, nokudaro achivatadzisa kukuvara.
Ivo vanoteerera uye vari nyore kudzidzisa, ndezvipi zvimwe zvaungabvunze? Ramba uchiverenga kuti uzive iyo nhoroondo, maitiro, hanya, ... muchidimbu, kuita nezve rudzi urwu runoshamisa.
1 Nhoroondo yeGerman Mufudzi
2.1 Mufudzi wechiGerman mutema
2.2 Kune here muchena wechiGerman mufudzi?
3 Mufudzi wechiGerman maitiro
5 Mufudzi wechiGerman Hutano
6 Kutenga matipi
6.1 Tenga mukuchera
6.2 Tenga kubva kuchitoro chechipfuwo
6.3 Tenga kubva kune mumwe munhu
8 Tora Mufudzi wechiGerman
Nhoroondo yeGerman Mufudzi
Iyi imbwa inoshamisa inotangira kubva kuGerman muzana ramakore rechiXNUMX. Panguva iyoyo munyika chirongwa chekuberekesa imbwa chaiitwa kuchengetedza nekuchengetedza boka remakondohwe, nekuti mapere aigara achivarwisa. Muna 1899 Sangano revashamwari veGerman Mufudzi rakagadzirwa, uye kubva ipapo zvichienda mberi, zvienzaniso zvaizopedzisira zvagadzirisa rudzi rwacho zvakasarudzwa.
Yekutanga pane iyi yaive imbwa yainzi Jack, yaive nechitarisiko chemhumhi uye yakasimba hunhu, ine bvudzi rakachena. Hunhu uhu hwakagarwa nhaka nembwa dzakatsiva. Asi kusarudzwa uye nzira yekuberekesa yakaenderera, sezvo zvaive zvisina kukwana kuti ivo vakagara nhaka, asi zvaitsvagwawo kudzivirira kuti varege kutsakatika. A) Hongu, Maximilian von Stephanitz, anonzi baba vezvirudzi, aigara achida kuchengetedza zootechnical mashandiro emhuka.; ndiko kuti, aida kuti varambe vachiita imbwa dzemakwai, imbwa dzinoshanda, uye kwete kambani yakawanda.
Dambudziko rakamuka vanhu pavakatanga kugara munyika iri kuramba ichisimukira, saka Von Stephanitz, achinetsekana nekupona kwerudzi urwu, akanyengetedza hurumende yeGerman kubvuma kutora imbwa idzi uye, nekudaro, vakaita basa remupurisa. Basa ravasina kutora nguva kuti vabude, uyezve, vakariita nemazvo zvekuti nanhasi vachiri kushandiswa sembwa dzemapurisa.
Parizvino, vafudzi veGerman ndevamwe vanoyemurwa nevose vanoda imbwa.
Mufudzi wechiGerman imbwa hombe, ine huremu hwe30 kusvika 40kg yevanhurume, uye 22 kusvika 32kg yevakadzi. Kureba kwekusvava kuri pakati pe60 uye 65cm mavari, uye pakati pe55 ne60cm mavari. Ivo vane rakasimba, rakareba, uye rine mhasuru muviri, iine makumbo akapamhama uye muswe murefu. Muromo wakareba, uye nzeve dzakakura, mativi akaumbwa.
Kana riri bvudzi, rakajairika ndere iro rine shava nematema matema, asi kune zvekare kuti vane yakasviba nhema, yakatsvuka uye nhema, saber. Kureba kwebvudzi kunogona kupfupika kana kureba.
Hupenyu hwake hunotarisirwa ndihwo Makore 13.
Mufudzi wechiGerman mutema
Idzi imbwa dzinowanzo shandiswa kunyanya kubasa, uye mashoma mashoma makennels akatsaurirwa kuaberekesa. Asi zvinofanirwa kutaurwa kuti ine hunhu hwakagadzikana zvishoma kana zvichibvira iyo ine shava shava, uye iri nyore kwazvo kudzidzisa. Uye zvakare, ishamwari huru uye mudziviriri.
Kune here muchena wechiGerman mufudzi?
Kunyangwe paine imbwa inotaridzika kunge yedu protagonist asi iine chena vhudzi, haina kuzivikanwa senge rudzi urwu, asi se »swiss chena mufudzi». Rudzi rwakanaka urwu rwunobva kuSwitzerland uye, zvinopesana nezvaungafunge, haisi imbwa yealbino, asi iro jena jena rinokonzerwa nemajini.
Mufudzi wechiGerman maitiro
Iyi imbwa ndiyo Akanaka kwazvo, uye zvinogara zviripo teerera kune zvese zvinoitika zvakamukomberedza. Intelligent y ane rudozvakare nzwisisika. Iye anowanzo gara aine chivimbo kwazvo, hunhu hwamuita imwe yembwa dzinodiwa kwazvo kuita basa rekutsvaga, zvese kuvanhu uye zvinodhaka kana zvinoputika.
Anowirirana chaizvo nevana, kunyange zvichikosha kuti ivo nembwa dzidze kuremekedzana nzvimbo yemunhu.
Imbwa Mufudzi wechiGerman imhuka inoda yakawanda yekurovedza muviri. Unogona kugara pasina matambudziko mumba, chero bedzi achitorerwa mafambiro uye achimhanya kazhinji. Zvakare, zvakakosha kuti iridzwe naye mazuva ese nemitambo yekudyidzana yaunowana iri kutengeswa muzvitoro zvezvipfuyo kuti iye agone kudzidza uye kunakidzwa panguva imwe chete.
Kunge chero imwe imbwa, iwe unozodawo chikafu chemhando yepamusoro uye kuchengetedzwa kwezvipfuyo. Asi isu hatigone kukanganwa nezve kudzidziswa kana. Izvo zvakakosha kuti vanotanga kuvadzidzisa kubva pazuva rekutanga ravanogara nevanhu, kudzidzisa mirairo yekutanga (gara, paw, nezvimwewo), uye famba pane leash usina kudhonza. Iwe unofanirwa kufunga kuti imbwa hombe, uye nekukurumidza iyo painodzidza kuzvibata, zvirinani. Kune izvi, zvinokurudzirwa kushandisa zvakanaka kurovedza; Neiyi nzira isu tichaita kuti iye adzidze kuzvifunga iye, sezvo ari imbwa iyo ichagara inofara padivi pako.
Mufudzi wechiGerman Hutano
Kuva rudzi rwunodiwa zvakanyanya, rwuri kuberekwa mukuwandisa. Nekudaro, matambudziko anotorwa mukusarudza uye kubereka zvinoreva kuti kune vafudzi veGerman vakawanda uye vane hudyu uye gokora dysplasia, matambudziko eziso, dumbu richimonyoroka o matambudziko akabatana.
Ungada here kugara nemufudzi akanaka wechiGerman? Kana zvirizvo, une chokwadi usazvidemba. Cherekedza aya matipi:
Ichi chizvarwa icho, sezvataona, chinogona kuve nematambudziko akakosha ehutano, saka pamusoro pekuita chokwadi chekuti kennel iri yakakomba uye inyanzvi, zvakakoshawo kubvunza nezve hutano hwevabereki wembwanana iyo yatiri kuda kuenda nayo kumba. Heano makiyi ekuvaziva.
Paunoshanyira, iwe unofanirwa kuwana zvivakwa zvakachena.
Imbwa vanofanirwa kuve vane hutano uye vanoshanda.
Uyo anotarisira inofanira kupindura mibvunzo yese zvaunazvo.
Unofanira kunge uchikwanisa ziva nhoroondo yemhuri yeimbwanana, uye pamusoro pezvose, kana ivo kana vane chero chirwere.
Muridzi wepakati haizopa kune vana vasati vasvitsa mwedzi miviri yekuberekwa.
Kana zuva rakatarwa rasvika, ichaendesa shamwari yako nyowani nezvinyorwa zvese zvakarongeka (pasipoti uye chizvarwa).
Tenga kubva kuchitoro chechipfuwo
Kana iwe ukasarudza kuitenga muchitoro chechipfuwo, iwe unofanirwa kuziva icho Iwe haugone kuziva kuti ndevapi vabereki kwaanobva kana ivo havazokupe iwe wedangwe. Saka unogona kutora kumba imbwa inogona kuve nedambudziko rehutano. Zvakadaro, mutengo uri pasi.
Tenga kubva kune mumwe munhu
Iwe unofanirwa kuve wakangwarira kwazvo neinternet adsZvakanaka, pane zvakawanda (zvakawandisa) zvakatumirwa nevanhu vanoda kukanganisa avo vari kutsvaga shamwari ine furry. Saka zvino ungaziva sei avo vari pachokwadi?
Kushambadzira kunofanirwa kunyorwa mumutauro mumwe chete. Zvingaite sezviri pachena, asi vanhu vazhinji vakatsauswa mukutenda kuti "zvakajairika" izvi zvaive zvichizadzikiswa. Iwe unofanirwa kuziva kuti kazhinji vanhu ava vanonyora chinyorwa mumutauro wavo, vanoshandura nerubatsiro rwemushanduri wepamhepo, uye vanoteedzera nekunamatira iwo mavara mune kushambadzira. Vashanduri veWebhu vakavandudza zvakanyanya, asi ivo vanoramba vachikanganisa, saka kana iwe ukaverenga izwi risingawirirane (kana kwete zvachose), fungidzira.
Mumushambadziro ruzivo rwekubata runofanira kuonekwa yemunhu wacho, zvirinani nhamba yefoni nedunhu.
Unofanira kukwanisa kusangana naye kuti aone imbwa, uye nekudaro kukwanisa kuve nechokwadi chekuti vanochengetwa zvakanaka uye nekudaro, kuti hutano hwavo hwakanaka.
Munhu uyu haizokupe iyo mbwanana ine isingasviki mwedzi miviri yekare.
Ivo havazokumbira iwe mari kumberi.
Mutengo weGerman Mufudzi unosiyana zvichienderana nekwaunotenga. Semuenzaniso, kana ichibva purazi, mutengo uripo 800 euros; Kune rimwe divi, kana iri muchitoro chechipfuwo kana munhu akazvimiririra, inogona kuita nezve 300-400 euros.
Tora Mufudzi wechiGerman
Kunyangwe iri yerudzi rwakachena, Zviri nyore kwazvo kuwana akati wandei mameni mumakamuri, uye inodzivirira, kazhinji vakuru. Neichi chikonzero, kana iwe uchida kubatsira mhuka yakagara kwemakore mazhinji nemumwe munhu akazopedzisira aisiya, kubva pano Ndinokukurudzira kuti uite.
Tinokusiya uine mashoma mafoto eiyi inoshamisa imbwa:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Mufudzi wechiGerman
Maria sandra akadaro
Ndichangobva kutora musikana ane makore matanhatu uye nekadhi rake redzinza uye ndiri kuimba, ndinogara mufurati uye anoteerera zvakanyanya, akadzikama, anotamba nekatsi uye nemusikana musikana akanaka, anoteerera. zvose, zvinodzivirira zvikuru, ( Ndisati ndamutora, ndaiva nembwa mbiri uye dzakanga dzisina hanya neni uye dzakaparadza silo) uye nemufudzi uyu weGermany ndinofara zvikuru, pakupedzisira ndakawana shamwari yangu inodzivirira inodzivirira, imwezve ye mhuri, kugamuchirwa mwedzi?
Pindura María sandra
Mary moss akadaro
Mhoro! Ndinoda rudzi urwu! Mazuva matanhatu apfuura Jack wangu akafa, muenzaniso wakanaka uye andisiya ndashungurudzika kubva pandakamuchengeta nerudo rwese kubva pamwedzi miviri kusvika pamakore gumi nematanhatu mwedzi mitanhatu yaaive nayo paakafa. Ndinokukurudzira kuti utore mbwanana yerudzi urwu, ndiyo kambani yakanakisa, kunyangwe ichipwanya moyo wako paunofa, sezvazvakaitika kwandiri.
Pindura kuna Mary Moss
Imbwa isina vhudzi inobereka
Matipi ekudzivirira imbwa yako kubva kuzuva